I-DNA isolation series series Suppliers and Factory |China DNA isolation series Manufacturers
Ikhithi yokuhlanza ye-PCR
◮ Uhlu olubanzi lokutholwa kwe-DNA: Izingcezu ze-DNA ezimfishane njengo-60bp futhi ezinkulu njengo-10kb zingatholwa.
◮ Ukusebenza kahle kokutakula: Ukusebenza kahle kokululama ngokuvamile kungaphezu kwama-80%, futhi okuphezulu kakhulu kungafinyelela ngaphezu kwama-95%.
◮ Isivinini esisheshayo:Kulula ukusebenza, ukutakula kwe-DNA fragment kungaqedwa phakathi nemizuzu eyi-15 futhi i-primer dimer ingasuswa ngokuqondile ngaphandle kokutholwa kwejeli.
◮ Safety:Akukho kukhishwa kwe-organic reagent edingekayo.
◮ Ikhwalithi ephezulu: Izingcezwana ze-DNA ezitholiwe zimsulwa kakhulu, ezingahlangabezana nokuhlolwa okuhlukahlukene okulandelayo.
Ikhithi yokuhlukanisa i-FFPE DNA
Ikhithi yokuhlukanisa i-Soil DNA
Ikhithi yokuhlukanisa i-DNA yendle
I-Buccal Swab/FTA Card DNA Isolation Kit
Ikhithi yokuhlukanisa i-DNA yebhaktheriya
I-Mouse Tail DNA Mini Kit
Ikhithi Yokukhipha Ijeli
◮Uhlu olubanzi lokutholwa kwe-DNA:Izingcezu ze-DNA ezimfishane njengo-30bp futhi ezinkulu njengo-10kb zingatholwa.
◮Ukusebenza kahle kokutakula okuphezulu:Ukuphumelela okuphezulu kakhulu kokululama kungafinyelela ngaphezu kwama-80%.
◮Ukukhishwa kwesistimu encane:okungenani isixazululo esingu-30μl elution singasetshenziselwa ukuveza, okungase kwandise ngempumelelo ukugcwala kwezingcezu ze-DNA ezitholiwe.
◮Isivinini esisheshayo:Kulula ukusebenza, ukubuyiselwa kwengcezu ye-DNA kungaqedwa phakathi nemizuzu eyi-15.
◮Ikhwalithi ephezulu:Izingcezwana ze-DNA ezitholiwe zimsulwa kakhulu, ezingahlangabezana nokuhlolwa okuhlukahlukene okulandelayo.